Blockchain Izindaba 06.06.2018 - Blockchain Izindaba
Blockchain Izindaba 06.06.2018
Indian Amaphoyisa Bust Massive Crypto ezisekelwe Ponzi Scheme
I Ponzi lalinabashumayeli izinhlelo eziningana ngumuntu dr. Amit Lakhanpal, CEO of the Imali Trade Coin Group futhi CMD we Flintstone Group. Izikhulu ukuthi Lakhanpal esedale a cryptocurrency ebizwa ngokuthi Imali Trade Coin (MTC), yena kakhulu imakethwa owenziwe umphakathi waseNdiya ebanzi ukuze ukuyengela zimali kwezinye amadili zokucabangela. Ihhovisi e Orion Business Park eyayithengwe Flintstone Iqembu ingcebo ukuthuthukiswa ejensi kuthiwa “esikhungweni lokukhwabanisa” ngentonga yalo orchestrating iningi lawo imikhonyovu zokukhwabanisa; I zimali abangaqaphile “kayishumi kuya amabili e izinyanga nje kwezinyanga ezine kuya kweziyisithupha,” ibika Times Of India. Abanye bathi ukuthi abanye abatshalizimali babeze wathembisa yisakhamuzi Caribbean, ingcebo futhi ibhange Swiss akhawunti e esenana lokutshala izimali zabo.
Kulinganiselwa ukuthi inani elilinganisiwe yimali oyithole ngalokhu uhlelo Ponzi jikelele cishe 500 crore, okuyinto kulingana $ 6,699,450,000.
Phakathi ngokudayisa, amaphoyisa Thane waboshwa futhi waboshwa Taha Kazi, omunye ukhiye Flanking ochwepheshe, kodwa namanje ngifuna Lakhanpal nezinye izibalo emine esemqoka sokukhwabanisa.
I Ponzi ukuthi liphenywa iziphathimandla zendawo elandelayo isikhalazo kusukela Managing Director Delhi sika uPravin Agarwal ngemuva kokuthola akukho ukukhokhelwa kusukela inkampani. Isekela iSikhulu Samaphoyisa Abhishek Trimukhe wathi:
“Thina baloba zobulelesi Chitalsar Isiteshi samaphoyisa, lapho abamangalelwa adayiswa uhlamvu cryptocurrency, futhi wadukisa abantu eziningana.”
Kusuka lapho, manje amaphoyisa ngikhiphé ngokusemthethweni i “icala lokukhwabanisa, ukwephulwa lobugebengu, zokubhumbuluza nezinye izindawo ezifanele IPC, ngaphezu uMthetho Maharashtra for the Ukuvikelwa Zimali Nesithakazelo, 1999, futhi ngaphansi Information Technology Mthetho”.
Nakuba-ke ayikaziwa kude kangakanani lesi simiso Ponzi abathintekayo endaweni, umbiko wamaphoyisa ukuthi kokuseshwa yesibili zizokwenzeka omunye ehhovisi kailas Industrial Park, Vikhroli.
Ngemva kwalokhu ucabanga, abaningi sebekholelwa ukuthi lokhu umkhonyovu iyingxenye Ponzi olukhudlwana ezisebenza kuzo Dubai. It esanda libike ukuthi Lakhanpal isivele abambisene neKhabhinethi lakhe Highness Sheikh Ahmed Bin Obaid Al Maktoum sika ukwakha “Al Teller Group,” entsha Dubai ezisekelwe Diamond-wasekela mfihlo sokuqalisa. It ihlose ukwakha blockchain amafa ukuthi imali amagugu kanye kungenziwa adayiswa nge e-indlu lokushintshisana. It is kusikhathaze ukuthi Al Kasir Iqembu usethule kakade yayo “Oku kokuqala Blockchain Asset Umnikelo” ngokusebenzisa Al Kasir Iqembu portal, okuyinto ukuheha utshalo zimali. Kungakhathaliseki izimangalo ukuthi lena eqinisweni unina Ponzi ukuze thugs omncane engenathi, kusazobonakala.
Kraken Daily Market Umbiko 05.06.2018
$158M adayiswa kuwo wonke ezimakethe namuhla
Kuyini ekuphambukeni? The Bitcoin...
Blockchain Izindaba 25 Januwari 201...
uDkt. Prash CEO of Caleb & B ...
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 05.06.2018
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 07.06.2018